Madaxweyne Biixi Oo Sheegay In Aannay U Barooranayn Waaheen Oo Wax Ka Barteen Masiibadaa - #1Araweelo News Network
Madaxweyne Biixi Oo Sheegay In Aannay U Barooranayn Waaheen Oo Wax Ka Barteen Masiibadaa
Madaxweyne Biixi wuxuu sharaxay Qorshaha Xukuumadda Ee Dib-u-dhiska Suuqa, Dhaqaallaha Loo Hayo Iyo Mustaqbalka
Hargeysa(ANN)-Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa sheegay in dabkii suuqa gaancsiga ee Waaheen ee shufbeelay 1 April 2022, wax baddan Somaliland ka baratay, isagoo haraxaad dheeri ah ka bixiyay qaabka ay guddida uu magcaabay u wado hawshaa iyo qorshayaasha ilaa xilligan ay fuliyeen.
Madaxweyne Biixi, wuxuu sheegay in aannay Somaliland u calaacalayn masiibadii kasoo gaadhay dabkaa oo wixii ay haysato wax ku qabsanay, isla markaana aannay qorshaha ugu jirin wax cid kale ka imanayaa, balse ay hawsheeda iska wadanay, iyadoo ku xisaabtay wixii ganacteeda ku jira.
Khubadiisa dastuuriga ah oo Madaxweyne Biixi maanta oo Isniin ah 9 May 2022, u jeediya labada golle ee wakiillada iyo guurtida oo ah Baarlamaanka ayuu si gaar ah ugu xardhay qorshaha xukuumadda ee arrinta suuqa Waaheen iyo waxa uga qorshaysan.
Wuxuuna, ka waramay dhaqaalaha ilaa xilligan lo ohayo iyo qaabka loo shaxeeyay, siagoo ku bilaabay sidan: –
“ Suuqa Weyn ee Waaheen.Waxa uu ka mid ahaa suuqyada ugu waaweyn, uguna dhaq-dhaqaaqa badan Gobolka Geeska Afrika. Waxa uu ahaa suuq udub dhexaad u ahaa dhaqaalaha iyo ganacsiga dalkeena, isla markaana waraabin jiray dalal badan oo Gobolka ah.
Waxa ku gubtay Suuqa Waaheen ku dhawaad 3,673 Ganacsioo kala duwan, waxaana lagu waayey dhammaan hantidii iyo dhaqaalihii hoos yaalay Meheradahaasi ganacsi. Waxa uu maanta dabkaasi gacanta dhulka u saaray dadkeenii lahaa ganacsiyadaasi, dadkii u shaqaynayey, dadkii ka dhex macaashayey dhaq dhaqaaqaasi ganacsi ee socday iyo dhammaan dadkii qaadaa-ma-dhergaha ahaa ee ku sii daba noolaa ganacsigaas.
Waxa la diyaariyey Afar Suuq oo kuMeel-gaadh ah oo kala ah: Beerta Xoriyadda, Hadh-wanaag,Laynka Booliska iyo Injida.Waxa la gaadhsiin doonaa suuqyada ku-meel gaadhka ah ilaa Toddoba suuq.
Dawladda Hoose ee Hargeysa oo kaashanaysa Guddida Heer Qaran ee Dib-u-soo-kabashada Suuqa Waaheen, waxa ay nadiifiyeen Suuqii gubtay, waxaanay ka qaadeen 1,879 Lawdhoo qashin iyo iskaraab ah.
Waxa aynu ka baranay in guryaha ganacsi ee la dhisayo loo sameeyo nidaamka bad-qabka guryaha. Waxaanan farayaa Dawlaha Hoose iyo Wasaaradda Hawlaha Guud, Dhulka iyo Guriyeynta in ay diyaariyaan hab-raacyada iyo hagayaasha bad-qabka dhismayaasha dadweynaha., ayuu yidhi, Madaxweyne Biixi oo ka hadalayayqorshaha mustaqbalka suuqa Waaheen ee xukuumadda Somaliland iyo suuqyada kale ee dalka.